बाख्राको दुधले यसरी बढाउँछ यौनशक्ति | Rajmarga
सामान्यतः मानिसहरु पाचनसम्बन्धी समस्या झेलिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले दिनहुँ गाई वा भैसीको दुध सेवन गर्दा समस्या समाधान हुने गरेको बताइन्छ ।
यदि बाख्राको दुध सेवन गर्ने हो भने पेटसम्बधी समस्या समस्या समाधान हुने गर्दछ । अध्ययनका अनुसार बाख्राको दुध सेवन गर्दा भूँडीमा जलत कम हुन्छ । दैनिक बाख्राको एक ग्लास दुध सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छ ।
क्याल्सियमको कमीका कारण हड्डी कमजोर हुने गर्दछ । बाख्राको दुध पिउँदा क्याल्सियमको कमी समेत अन्त्य हुने गर्दछ । यसले हड्डीको समस्या समाधान गर्छ ।
बाख्राको दुधमा सेलेनियम मिनरल हुने गर्दछ । जसले शरीरको इम्युन प्रणालीलाई बढाउँछ । शरीरलाई स्वस्थ र बलियो राख्नका लागि यो मिनरल निकै लाभदायी मानिछ ।
मुटुलाई स्वस्थ राख्न पनि बाख्राको दुध लाभदायक हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोललाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दछ । बाख्राको दुधले हृदयघात, स्ट्रोक्स रोक्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । पोटासियमको स्तर यसमा बढी हुने भएकाले यसले ब्लड प्रेसरलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सघाउछ ।
प्रोटिन शरीरको विकास र ग्रोथका लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रोटिनका लागि पनि बाख्राको दुध उपयुक्त मानिन्छ । यदि बच्चाको ग्रोथ सही चाहनु हुन्छ भने प्रोटिनको सही मात्र मिल्नु आवश्यक छ। त्यसैले यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बाख्राको दुध हो ।
यौन शक्ति बढाउन पनि बाख्राको दुध महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । ५ वा ७ खजुरलाई ताजा बाख्राको दुधमा मिलाएर रातभर छाड्ने र बिहान त्यसलाई बाख्रोको दुधसँग सेवन गर्दा यौन शक्ति बढ्ने गर्दछ । एजेन्सी
Previous post: हात हेरेर भाग्य बताउने र विश्वास गर्नेहरु हो ! कस्ले भन्छ हात नहुनेको भाग्य हुँदैन ?
Next post: कलाकारिता तथा मोडलिङमा भबिष्य कोर्दै – मोडल बिपना श्रेष्ठ
प्रतिरोधी क्षमता कम हुँदा देखिन्छन् यस्ता संकेत….
यस्ता छन् लसुनका फाइदा तथा बेफाइदाहरु
यस्ता छन् बिहानै खाली पेटमा चिया पिउनुका बेफाइदा
यो कारणले दुख्छ कम्मर, यस्ता छन् दुखाई कम गर्ने उपाय
बिना अप्रेशन पाइल्स रोगबाट छुटकारा पाउन अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय